Iji ghọtakwuo ihe Internet Protocol Suite bụ, anyị ga-ebu ụzọ kọwaa ihe protocol bụ. Usoro iwu bụ usoro nkwekọrịta nke ọ bụla kwadoro maka usoro nke ime ihe. Ọ bụ isi ụkpụrụ ma ọ bụ usoro iwu nke kọmputa ga-agbaso iji jikọọ ma kesaa data n'etiti ibe gị. Njikọ a n'etiti kọmputa na netwọk a na-akpọ protocol nkwukọrịta.
IPS ma ọ bụ Internet Protocol Suite na-arụ ọrụ nchịkọta protocol nke ọrụ Ịntanetị. Achịkọ protocol bụ usoro nke usoro nkwekọrịta nke na-arụkọ ọrụ iji mepụta netwọk. Ọ bụ onye isi oche, tinye okwu ahụ bụ "nchịkọta". Okirikiri ọ bụla na-akwado nke dị n'elu ya ma jiri otu dị n'okpuru.
Usoro Ntanetị nke Internet Protocol
Ndị a na-akpọkarị TCP / IP ma ọ bụ Transmission Control Protocol na Internet Protocol, Internet Protocol Suite nwere anọ abstraction n'ahịrị na ha onwe ha protocols. TCP na IP bụ usoro mgbagwoju anya kachasị mkpa ma bụrụ usoro nhazi mbụ nke netwọk nke akọwapụtara na ọkọlọtọ a.
Ihe nkedo abstraction anọ bu:
1.	Njikọ Njikọ : - Ogwe oyi a nwere teknụzụ nkwurịta okwu eji na netwọk mpaghara.
2.	Layer Ịntanetị : - The internet Layer bụ ọrụ maka ijikọ netwọk mpaghara, ya mere, ịtọzi ịntanetị.
3.	Mbupu Mbupu : - Ogwe a na-ejikarị nkwupụta sitere na onye ọbịa gaa nọrọ n'ụlọ.
4.	Layer Ngwa : - Ogwe ngwa ngwa na-ejikọta mmekọrịta nke na-adabere na usoro usoro na-aga n'etiti ndị ọrụ ịntanetị dị iche iche na-ekwurịta okwu.
TCP / IP ma ọ bụ Internet Protocol Suite nwere ọtụtụ ogbugba ndu n'ime ebe anọ abstraction. Ndị isi bụ ihe ndị a:
1. Protocol Mgbanwe HyperText: - eji sava weebụ maka ibe weebụ ka egosiri na ihe nchọgharị ahụ.
2. Protocol Transfer File: - ụdị usoro ịntanetị nke na-enye ndị ọrụ aka ịkwaga ma ọ bụ bugharịa faịlụ site n'otu kọmputa gaa na nke ọzọ.
4. Telnet na BitTorrent na nchekwa ngwa
5. TCP na UDP ma ọ bụ Usoro Ihe Ntuziaka Onye Ọrụ na mpaghara nchekwa
6. IP na netwọk netwọk
8. FDDI ma ọ bụ Interface Data Distributed Fiber na PPP ma ọ bụ Point-to-Point Protocol na nchekwa data njikọ
9. 10Base-T, 100Base-T na DSL ma ọ bụ Digital Subscriber Line na akpụkpọ anụ ahụ
Ụlọ Ọrụ Ịrụ Ọrụ Ịntanetị
Ụlọ Ọrụ Ịrụ Ọrụ Ịntanetị ma ọ bụ IETF na-ejikwa TCP / IP ma ọ bụ Internet Protocol Suite. O nweghi oke akwukwo ma o nweghi ihe ndi choro. Ọ na-agụnye ndị otu na ndị ọrụ ndị ọrụ afọ ofufo niile. Otú ọ dị, ndị na-akwado ha na-akwụkarị ọrụ ha ma ọ bụ ndị ọrụ ha bụ isi.
Ọ na-emeghere ndị niile chọrọ ịkekọrịta na mkparịta ụka ma ọ bụ nzukọ. Ọ na-agba ọsọ na usoro nkwekọrịta siri ike nke njedebe ikpeazụ nke mkpebi ikpe bụ nkwekọrịta ndepụta nzipu ozi. Ọ bụ otu akụkụ nke Society Intanet ma na-ahụ maka Ụlọ Ọrụ Ịntanetị nke Ịntanetị (IAB). Ndị IAB na-arụkwa Ọrụ Nchọpụta Ịntanetị (IRTF).
Kedu otu adreesị IP
Tupu anyị aghọta ihe adreesị IP bụ ma mee, anyị ga-ebu ụzọ mata ihe IP pụtara. IP bụ ihe nchịkọta maka Protocol Intanet. Ọ bụ usoro iwu kachasị mkpa nke ịntanetị na-eji ekwurịta okwu n'ime netwọk ya. Encapsulated na packet netwọk ma ọ bụ datagram, a na-ebute ozi site na Protocol Suite Internet. Nke a bụ n'ụzọ doro anya otú anyị si enwe ike izipu ma nata ma zipu ozi site na ịntanetị.
Ebe ọ bụ na ezitere ozi na natara, usoro a chọrọ adreesị iji nyere aka chọpụta ebe data ga-aga. Nke a bụ isi ihe adreesị IP bụ.
Ịghọta okwu IP
A na-ekenye igwe ọ bụla ejikọrọ na netwọk akara akara ma ọ bụ adreesị IP iji nye ya ohere iji Protocol Ịntanetị maka nkwurịta okwu. Ọ nwere ọrụ abụọ: njikwa ebe obibi na onye ọbịa ma ọ bụ njirimara interface netwọk.
N'okwu nchịkwa, Adreesị IP bụ nọmba ọnụọgụ abụọ 32-bit echekwara na faịlụ ederede ma gosipụta na ọkwa ndị ejiri iji chọta ngwaọrụ ejikọrọ na netwọk. N'ihi ntanetị nke ịntanetị, enwere nsogbu ọhụhụ nke inwekwaghị adreesị dịnụ n'ọdịnihu. E mepụtara 6 IP IP na 1995 iji dochie nọmba 32-bit ọkọlọtọ na ibe 128 maka ogologo oge. Otú ọ dị, mgbanwe a ga-eme ka ọgba aghara nke usoro mgbasa ozi ụwa.
Nchịkọta Ọnụ Ọgụgụ Ịntanetị
Otu ikike a na-akpọ IANA ma ọ bụ Nchịkọta Ọnụ Ọgụgụ Ịntanetị na-achịkwa ebe nchekwa adreesị IP a gburugburu ụwa. Ha na-enye ndị na-edebanye aha Ịntanetị ise ma ọ bụ RIR iji nyefee ụfọdụ adreesị IP adreesị maka ndị na-eweta ọrụ na mpaghara ma ọ bụ na ndekọ aha internet. Ha na-ahụ na adreesị IP ọ bụla dị iche iche ma ọ bụghị nke a na-edegharị n'ụwa niile.
Ụkpụrụ abụọ maka adreesị IP dị ugbu a. 4 IP bụ nke na-eji 32-bit nchikota ọnụọgụ abụọ ọnụọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ 4 na-egosipụta site na ntụpọ. Nke a bụ ọkọlọtọ nke a sịrị na ọ bụ ngwa ngwa na-emezigharị ma na-agbanwe ka ọ bụrụ ụkpụrụ IP ọhụrụ.
A na-akpọ ọkọlọtọ ọhụrụ a 6 IP nke nwere nchịkọta ọnụọgụ abụọ 128 iji mepụta otu adreesị pụrụ iche. A na-egosiputa na nọmba 8 nke hexadecimal nọmba nke ndị na-esite na ya.
Mgbe e mepụtara 4 IP ahụ, ịntanetị enweghị oke dị ka ọ dị taa. IPv4 nwere naanị njikọ 232, na-enye naanị ikikere adreesị 4.3 dị iche iche maka ndị ọrụ Ịntanetị niile gburugburu ụwa. IPv6 emeela ka adreesị adreesị 2128 mee ihe.
Adreesị IP dị omimi ma dị omimi
Adreesị IP nke kọmputa nwere ike ịbụ ma ọ bụ dị ike. A na-enweta adres adreesị mgbe ị na-ahazi adreesị ahụ n'onwe gị site na ịtọzi ntọala netwọk kọmputa gị. Nke a nwere ike ibute nsogbu ma ọ bụrụ na ịnweghị nghọta zuru ezu gbasara TCP / IP. Adreesị dị omimi bụ ihe kachasị. A na-enye ha ọrụ site na Dynamic Host Configuration Protocol ma ọ bụ DHCP. Otú ọ dị, adreesị dị omimi na-arụsi ọrụ ike maka obere oge, mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-agbanyeghachi nlele ahụ na adreesị IP.
Jiri na Mkpa nke Usoro Ịntanetị
Usoro Ịntanetị bụ usoro nkwekọrịta kachasị mkpa maka izipụ ngwugwu netwọk sitere na isi mmalite nke onye ọbịa gaa ebe obibi site na Internet Protocol Suite ma ọ bụ IPS. Nke a bụ ihe eji eme ihe na Usoro Ịntanetị. A na-eziga ozi nke ozi ndị na-aga n'etiti kọmputa na ịntanetị site na Ịntanetị Protocol Suite. N'ihi nke a, ebe ọ bụla na Ịntanetị ka a ga-amata site na adreesị IP iji nweta ma zipu ndị a. Ya mere, adreesị IP bụ ihe na-enye Internet Protocol mkpa ya.
A chọrọ ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na ịntanetị iji nwee adreesị IP pụrụ iche. Mba ọ bụla nwere ọtụtụ adreesị nke ya iji kesaa ka ọ bụrụ na adreesị IP abụọ abụghị otu.
Enwere ike ịhụ ugbu a maka adreesị IP ndị a n'ihi nsogbu dị anya nke ịhapụ adreesị IP dịnụ. A na-etinye mgbalị dị ukwuu n'ịgbalị ịgbatị ndụ nke ụkpụrụ dị ugbu a ebe ọ bụ na ọ gbanwee ya ga-eme ka a kwụsị usoro nkwurịta okwu nke ụwa. N'agbanyeghị nke a, a ka na-arụ ọrụ iji mepụta ụkpụrụ ọhụrụ maka adreesị IP. A na-akpọ nke a Nkwekọrịta IP 6.
Ihe dị mkpa iji Usoro Ịntanetị
Enwere otutu ojiji nke Internet Protocol nke nyere ya mkpa ya.
Usoro Ịntanetị na-esote usoro ịza ajụjụ data ma ọ bụ ngwugwu ziri ezi. Adreesị ndị a na-ekpebi ebe a na-ebute ngwugwu ndị a ma zigaghachi ha ma ọ bụrụ na ha adịghị enye ha n'ụzọ gara nke ọma, dị ka ozi nzi ozi nke na-arụ ọrụ na adreesị ozi-e na adres ịnweta.
Usoro nnyefe na-akwado ndị na-agagharị agagharị nke na-enyere aka n'ịgbasa paịtọ ndị a ka a na-enye ha. Nke a na-eme ka nnyefe ahụ pụta ìhè ebe ọ bụ na a na-ezite data site na ngwaọrụ ma ọ bụ ndị na-eme njem. Dịka ọmụmaatụ, a na-ahazi ngwugwu dịka ntuziaka n'ozuzu ha ga-esi nyefee ma nyefee ha na ndị ọzọ na-agagharị agagharị ka ha gbanwee ọzọ na ya ruo mgbe ọ ruru kpọmkwem ebe ma ọ bụ adreesị IP.
Usoro nke nkwụnye ụgwọ ma ọ bụ data na ngwugwu nwere nkụnye eji isi mee na-akpọ encapsulation. Ime nke a jide n'aka na onye natara ya natara ya ma kọwaa ya.
Nhazi / nkwakọ ngwaahịa
A na-esote IP na nkwakọ ngwaahịa kpọmkwem tupu ya ebunye ya. Naanị onye nnata nwere ike ịkọwa usoro na ngwugwu a.
Ọ bụghị njikọ nkịtị na data njikọ netwọk site n'iji IP bụ otu nha ihu. Ka ha wee na-aga na netwọk mpaghara, IP ga-ekewa mkpụrụ ego ndị a ma ọ bụ datagram n'ime iberibe. Nke a na-enyekwa aka na netwọk dị irè.
Mgbe a na-ekewapụta akara data ahụ, IP na-eme ka ha banye na data data IP kpamkpam maka ngwaọrụ maka ibu ha. E mesịa, a gafere ya n'elu ọkwa dị elu maka ịkọwa data.
Ụdị Protocol Ịntanetị
Usoro ozo bu asusu eji eme ihe maka netwọk netwọk. Ịntanetị nwere ụdị dị iche iche nke protocol ndị a ma ọ bụ njikọ internet. Ndị na-esonụ bụ ụdị njikọ ịntanetị:
Usoro nchịkọta faịlụ
Otu n'ime ụzọ mbụ nke iweghachite ozi sitere na kọmputa ndị jikọọ na ịntanetị bụ ụdị ọrụ a na-akpọ Protocol Protocol. Enweghị ndị na-ese foto na ọtụtụ n'ime oge enweghị nkọwa maka ọdịnaya nke faịlụ mana o nyere gị ohere ilele aha faịlụ ndị dị na kọmputa na-arụ ọrụ. Achọrọ ihe ọmụma dị elu iji nweta ozi ịchọrọ iji ọrụ a.
Njikwa Nnyefe Njikwa (FTP)
FTP ma ọ bụ Njikwa Nnyefe Njikwa bụ ụdị usoro ịntanetị nke na-enye ndị ọrụ ohere ịkwaga ma ọ bụ kwaga faịlụ site n'otu kọmputa gaa na ọzọ. Ọ bụ otu n'ime ọrụ ịntanetị mbụ a zụlitere ma ka dị taa. Site na iji usoro FTP, mmadụ nwere ike ịbanye na kọmputa dịpụrụ adịpụ, na-agagharị na faịlụ na ya na ibudata ma ọ bụ ibudata faịlụ, ma ọ bụrụ na kọmputa na-enyefe ya. Naanị faịlụ faịlụ nwere ike ịhụ; ọ dịghị agụnye nkọwa nke ọdịnaya nke faịlụ ahụ. Mgbe ị na-agbalị ibudata ngwa software site na weebụ, o yikarịrị ka ị ga-ezute Protocol Ntanye Njikwa ebe ọtụtụ n'ime saịtị ndị na-enye ngwa maka nbudata iji ụdị usoro internet a.
Na ụdị usoro ịntanetị a, a na-enye faịlụ ndị nwere nkọwa dị na ya, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ma dịkwuo irè iji. Yiri ka esi kwadebe draịvụ ike kọmputa gị, ọ na-egosiputa faịlụ na kọmputa dị na kọmputa na usoro nchịkwa. N'agbanyeghị uru nke nkọwa nkọwa ya agbakwunyere, a naghị eji ya ọzọ ma ọ ka na-eji ya na saịtị ụfọdụ gopher.
Site na iji telnet protocol, ị nwere ike iji ma jikọọ na kọmputa kọmputa. Ọ ga-enye gị ohere iji ngwa sitere na kọmputa dịpụrụ adịpụ dị ka a ga - asị na ọ dị na kọmputa gị. Usoro a choro ka software ndi ozo di iche.
Ejiri kọmputa ma ọ bụ protocol email na-eji atọ dị iche iche bụ Mpempe akwụkwọ Mfe Mfe ma ọ bụ SMTP, Protocol Protocol Internet ma ọ bụ IMAP na n'ikpeazụ bụ 3 Protocol Post Office ma ọ bụ POP3.
A na-eji SMTP maka izipu ozi mgbe IMAP na POP3 na-eji maka ịnata ha. Imirikiti, ọ bụrụ na ọ bụghị, ndị na-ahụ maka ịntanetị na-akwado nkwado atọ a, Otú ọ dị, ihe kachasị ewu ewu gụnyere ịgụ SMTP maka izipu na naanị POP3 maka inweta ozi ịntanetị.
Usoro Ịnyefe HyperText (HTTP ma ọ bụ Web Wide Web)
Nke a bụ protocol eji weebụ maka ibe weebụ iji gosi na ihe nchọgharị. N'ozuzu, ọ na-agwa nchọgharị ihe ụdị ozi ga-atụ anya site na ibe weebụ. A na-ahụkarị ya na ebe ntanetị dị ka prefix na ibe weebụ ị na-eleta.
Kedu ihe bụ Internet Protocol
N'ịbụ nke e mepụtara na 1970s, Usoro Ịntanetị bụ otu n'ime ebe anọ nke Internet Protocol Suite ma ọ bụ IPS. A maara ya dị ka "Ịntanetị Ịntanetị" nke jikọtara netwọk mpaghara na n'aka nke ya, na-eme ka ịntanetị malite. O doro anya na Usoro Ịntanetị bụ protocol kacha mkpa. Ọ bụ ọrụ maka ịzigharị ngwugwu site na isi mmalite nke onye ọbịa na-aga ebe dabere na adreesị. "Ijegharị" bụ mgbe kọmputa na netwọk na-enweta otu ozi (a maara dị ka packet) ma kpebie ebe ị ga-ezite ya. A na-emejupụta akụkụ abụọ dịka nkụnye eji isi mee na ụgwọ data. Ebe ị na-eri na-adabere na adreesị ahụ kpọmkwem na nkụnye eji isi mee ya.
Otú Internet Protocol na-arụ ọrụ
E nwere ike iji usoro a tụnyere usoro nnyefe ozi na ihe atụ. Envelopu na-ekpuchi akwụkwọ ozi wee nwee nkọwa ndị na-ekpebi ebe ị ga-eziga leta (adreesị ozi-e) na adreesị ozi-e (adreesị isi mmalite). Envelopu dị na nke a bụ Isi nke IP, ọdịnaya nke akwụkwọ ozi ahụ bụ ngwugwu IP ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ. A na-akpọ usoro nchịkọta data na-etinye na bọtịnụ na-akpọ "encapsulation". Mgbe i debere akwụkwọ ozi na igbe ozi igbe ma weghachite ya ma wega ya na ntinye akwụkwọ ozi, ọ ga-aga na onye ma ọ bụ igwe nke na-eme mkpebi mbugharị. Onye na-agba afa ahụ tinye akwụkwọ ozi ahụ na akwụkwọ ozi ndị ọzọ na-aga n'otu ntụziaka ahụ. Ntugharị nke akwụkwọ ozi ahụ na ụdị dị iche iche (ma ọ bụ na okwu IP, ndị na-agagharị agagharị) ga-aga n'ihu ruo mgbe akwụkwọ ozi ga-abata na post ụlọ ọrụ nke mpaghara akọwapụtara na nkọwa ebe. Ọ bụrụ na, n'ihi ihe ụfọdụ, a pụghị ịnyefe leta ahụ, a na-eziga ya na adreesị ozi-e (adreesị isi mmalite).
Nke a yiri nnọọ otú Protocols Ịntanetị na-arụ ọrụ na ọrụ. Ihe kachasị dị iche bụ na ntụgharị IP nwere ọtụtụ nde ngwa ngwa karịa usoro nnyefe ozi. Ihe ndekọ niile anyị na-enweta na ịntanetị gafere usoro a.
Ike na Omume
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, ike nke Usoro Ịntanetị dịkwa ntakịrị adịghị ike ya. Ebe ọ bụ na Usoro Ịntanetị na-arụ ọrụ otu ụzọ ahụ n'ụwa nile ma nwee ike ịgafe ọ bụla nke nkwurịta okwu, ọ na-esikwa ike ịwakpo ya. Onye ọ bụla na ịntanetị nwere ike izipu packets n'ebe ọ bụla ọzọ na ịntanetị. Mpempe akwụkwọ ndị a nwere ike ịgagharị na kọmputa gị ma nwee ike iji ngwa na ya. Iji gbochie nke a ime, ị ga-etinyerịrị ma jiri firewall. Otú ọ dị, firewalls na-akwụsị naanị paswọọdụ iji rute kọmputa gị. Mgbe nkesa gị jupụta na mmiri, ọ malitere ịjụ ma ọ bụ ịgọnahụ ngwugwu. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ezigara n'ụzọ gị, ụzọ ị na-esi na firewall gị ka nwere ike iju mmiri na ị gaghị enwe ike iji ịntanetị rụọ ọrụ ruo mgbe izipu paịtọ na kọmpụta gị akwụsị.